Shiinaha Customized 2 1 boorsada dhabarka boorsada saarayaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada hal-garabka ah > 1 1 boorsada dhabarka ee boorsada
(1) Dharka kore ee labada-hal-boorso-boorso ayaa laga sameeyay dharka nylon Oxford + PU dhar. Maadadani waxay leedahay xoog silibid xoog leh waxayna xirtaa iska caabin. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah u xakameyn kara biyaha Roobka ee qoyan bacda, isku dhafkan ayaa leh waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, oo leh bilic sharaf leh Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4. (2) Dahaarka gudaha wuxuu ka samaysan yahay 210D nylon Oxford maro, kaasoo leh muuqaal dhalaalaya. (3) Buuxinta gudaha waxay ka samaysan tahay suuf EPE oo laastik ah oo sarreeya. Qalabkani waa mid khafiif ah, u adkaysi u leh shoogga, oo si wax ku ool ah u ilaalin kara waxyaabaha bacda ku jira.
Laba-hal-boorso boorso ah
1. Hordhaca alaabada boorsada laba-in-hal iyo labo laab ah:
(1) Dharka kore ee labada-hal-boorso-boorso ayaa laga sameeyay dharka nylon Oxford + PU dhar. Maadadani waxay leedahay xoog silibid xoog leh waxayna xirtaa iska caabin. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah u xakameyn kara biyaha Roobka ee qoyan bacda, isku dhafkan ayaa leh waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, oo leh bilic sharaf leh Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(5) Boorsadeena laba-hal ah ayaa ah mid u adkeysata xirashada, biyaha celiya, iyo yareynta culeyska. Waxay qaadi kartaa laptop 17-inch ah iyo joornaalada A4, fayl, dalladaha, muraayadaha biyaha, iwm.
(6) Boorsadeena laba-in-hal iyo laba-garabka ah ayaa ka furan dhinaca waana la soo qaadi karaa markii aad gacan soo gaarto. Naqshaddani waxay la jaanqaadaysaa caadooyinka dadka, umana baahnid inaad hoos u dhigto si aad waxyaabo u hesho.
Dhererka 30cmX Width 20cmX Dhererka 43cm
Waxaa ku jira kiniin, taleefanka gacanta, jeebka, joornaalka A4, dallad, galaaska biyaha
3. Astaamaha iyo codsiyada laba-in-hal boorso garabka laba-laab ah iyo laba-laab ah
5. Xirxirida iyo rarka boorsada laba-in-hal iyo labo garabka
(2) Cabbirka hal baako ee caadiga ah: 48cm X 34cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka
Calaamadaha kulul: 2 1 boorsada boorsada dhabarka, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka